सूर्यास्त - यसको मज्जा लिन सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरू पत्ता लगाउनुहोस् Absolut यात्रा
के तपाई सुन्दरको मजा लिन चाहानुहुन्छ? सूर्यास्त? यो सबैभन्दा प्रभावशाली प्राकृतिक घटनाहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले सँधै फाइदा लिनुपर्दछ। यस कारणका लागि, यद्यपि कहिलेकाँही हामी यसलाई ध्यानमा राख्दैनौं, यो सत्य हो कि त्यहाँ त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जुन यी सेटि settingsहरू विस्तार गर्दछ, किनकि उनीहरू उत्कृष्ट कार्यक्रमको रूपमा देखिने छन्।
यसमा समावेश सबै केहि को लागी, हामी छनौट गर्दछौं संसारमा सबै भन्दा राम्रो स्थानहरू र ती मध्ये हामी हाम्रो देशको केहि पोइन्टहरू भेट्टाउँछौं, जुन हामीले कहिले पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन। निम्न ठाउँहरू लेख्नुहोस् किनकि ती सबैले तपाईंलाई सबैभन्दा विशेष क्षणहरूको साथ छोड्नेछन्!
1 सूर्यास्त किन यत्तिको कदर गरिन्छ?
2 एक सूर्यास्त आनन्द लिन संसारमा सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरू
2.1 माउन्ट फुजी
2.3 सान्ता मोनिका
2.4 केप टाउन
2.5 ताज महल
2.6 थार मरुभूमि
2.7 मासाई मारा
3 स्पेनको सूर्यास्त वा सूर्यास्त हेर्नका लागि उत्तम क्षेत्रहरू
3.1 मिराडोर डे स्यान निकोलस
3.2 गुइल पार्क
3.3 गैलोकान्टा लगून
3.4 Finisterre, एक विशेष सूर्यास्त
3.5 पुन्टा अर्किला लाइटहाउस
3.7 यो भेद्रे हो
सूर्यास्त किन यत्तिको कदर गरिन्छ?
यो एक क्षण हो जब यो टाढा जान्छ आज बिदाई गर्दै र यस्तै, सूर्य अस्ताउँछ। त्यसकारण, जब यसको प्रकाश टाढा जान्छ वा ओर्लदै छ, यसले रंगहरूको संयोजनले एक जादुई वातावरण सिर्जना गर्दछ। दुबै स्वर्गको र पृथ्वीमा। त्यसैले सबै भन्दा रचनात्मक फ्ल्यासहरू सँधै हुने छ। केहि हामी चाहानुहुन्छ र अमर हुनु पर्छ। तसर्थ, यो पनि एक सबै भन्दा रोमान्टिक र आरामदायक सेटिंग छ। सबैजनाले यसलाई मनपर्दछ।
एक सूर्यास्त आनन्द लिन संसारमा सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरू
यो सम्पूर्ण जापान मा सब भन्दा माथिल्लो क्षेत्र हो, त्यसैले यो स्थान को महान प्रतीकहरु मध्ये एक भएको छ। को ज्वालामुखी यसले असंख्य कार्यहरूलाई प्रेरित गरेको छ र यो कसरी कम हुन सक्छ, यो ती क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जहाँ सूर्यास्त सबैभन्दा अविश्वसनीय हुन्छ। सूर्यले ज्वालामुखीमा प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ र लाभा जस्तो समान रातो रातो रंगहरूको सिर्जना सिर्जना गर्दछ।
मौसमसँगै कि सायदै २º below भन्दा कम ओर्लन्छ, हामीसँग पनि उत्तम विकल्प हुन्छ पूर्ण उडाएको सूर्यास्तको आनन्द लिन। थप रूपमा, छविहरू आफैंका लागि बोल्छन्, तर नीलो टोनको संयोजन ब्लू ह्यू र प्रभावशालीसँग समुद्र तट, सँधै हामीलाई सब भन्दा परामर्श स्थानहरू मध्ये एक बनाउनुहोस्।
यो सत्य हो सान्ता मोनिका तटहरू यो अनौंठो श्रृंखला वा चलचित्रबाट हामीलाई लाग्न सक्छ। तर यसको प्रसिद्धि अगाडि जान्छ र यो सूर्यास्त पनि सबैभन्दा जादुई क्षणहरू मध्ये एक हो। ठीक डक पक्षमा, सतर्कता फेरिस ह्विल जस्ता आकर्षणहरूको साथ, प्रभावशाली वातावरण सिर्जना हुनेछ।
हामी अब सम्म जान्छौं दक्षिण अफ्रीका यसको दोस्रो सब भन्दा जनसंख्या भएको देशको बारेमा कुरा गर्न सक्षम हुन जुन केप टाउन बाहेक अरू कुनै छैन। यद्यपि यो पोर्ट क्षेत्र को लागी प्रसिद्ध छ, त्यहाँ यो सूर्यास्त संग पनि जोडिएको छ। मे र अगस्टमा तिनीहरू जाडोमा प्रवेश गर्नेछन्, त्यसैले यसलाई प्रभावशाली रंग संयोजनको आनन्द लिन ग्रीष्म visitतुमा भ्रमण गर्न सुझाव दिइन्छ।
यस स्थानमा यो माउन्ट फुजी जस्तो केहि हुन्छ र त्यो सूर्यास्तको संयोजन यसमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र ओभरफ्लोभिंग जादूको साथ वातावरण सिर्जना गर्दछ। यदि आफैंमा, स्थान फारसी, इस्लामी वा टर्की तत्वहरूको बीचमा संयोजनको साथ अतुलनीय छ रात हुन यसले एक लगभग अवर्णनीय सुन्दरता दिन्छ, तपाईंले यसलाई बाँच्नु पर्छ।
यो ठाउँ महान को रूपमा पनि चिनिन्छ भारतीय मरुभूमि। यो पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र हो जुन भारतको उत्तरपश्चिमी भागबाट पाकिस्तानको पूर्वी भागसम्म जान्छ। यसमा केही वनस्पति र चट्टानी क्षेत्रहरू छन्। ठिक छ, तपाईं यसमा रात बिताउन सक्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँ यस उद्देश्यका लागि भ्रमणहरू छन्। यसैले, तपाईं सूर्यास्त प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुनेछ, जबकि एक अनौंठो अनुभवको आनन्द लिदै हुनुहुन्छ।
मानौं यो कुनै चलचित्र हो, हामी यस बारेमा कुरा नगरी समाप्त गर्न सक्दैनौं केन्यामा पार्क। यो संरक्षित सवाना क्षेत्र हो जहाँ सबै प्रकारका जनावरहरू यसमा बस्छन्। यस कारणको लागि, सिनेमाको संसारको विशिष्ट छविहरू दिमागमा आउँछन्। तर दूरीमा हामी सूर्यको बिदाइको पनि उपभोग गर्नेछौं जसले हामीलाई क्षितिजमा विशाल क्षेत्र छोड्दछ।
स्पेनको सूर्यास्त वा सूर्यास्त हेर्नका लागि उत्तम क्षेत्रहरू
मिराडोर डे स्यान निकोलस
हामी ग्रेनाडा र संग संग अल्हाम्ब्रा पृष्ठभूमिमा, हामी एक सबैभन्दा विशेष सनसेटहरूको गवाही दिन सक्छौं। कुनै श doubt्का बिना, यो यो भन्दछ कि यो बस्न हामी यो कसरी वर्णन गर्न सक्छौं भन्दा बिलकुलै फरक छ। रंग र संयोजनको सौन्दर्य यो सँगै सँगै मिलेर जान्छ।
Este पार्क कि हामी बार्सिलोनामा छौं पनि ठूलो सुविधाका साथ एक छ। ती सबै वास्तुगत लेआउटहरूसँग आफ्नै आश्चर्यजनक हुनुको अलावा, जब घाम लाग्छ यो चमक्न रोकिदैन। त्यहाँ देखेका र colors्गहरूको संयोजन साँच्चै आश्चर्यजनक छ।
यो प्राकृतिक आरक्षण एरागान र जारागोजा सबैभन्दा प्रतीकात्मक क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। यो स्पेनको सबैभन्दा ठूलो लग्नेहरूमध्ये एक हो। माछा नभए पनि, यस क्षेत्रमा चराहरू कसरी भेला हुन्छन् भन्ने कुरा सामान्य छ। तसर्थ, तिनीहरू, साथै स्थान र साँझ, ध्यानमा राख्नको लागि धेरै विशेष संयोजन बनाउँदछन्।
Finisterre, एक विशेष सूर्यास्त
मा A Coruña को प्रान्त। गलिसियामा हामी सूर्यास्त हेर्नका लागि उत्तम क्षेत्रहरू भेट्टाउँछौं। तर यसको लागि सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको एक बिन्दु हो जुन सबैभन्दा पश्चिमी मानिन्छ, जहाँ भूमि अन्त्य भयो र यसैले यसको नाम। समुद्रको आश्चर्यजनक दृश्यहरूको साथ, शो कम हुनेछैन।
पुन्टा अर्किला लाइटहाउस
यस पटक हामी लाग्छौं एल Hierro र विशेष गरी प्राचीन समयदेखि सबैभन्दा धेरै हेरिएको क्षेत्रहरूमा। त्यसैले यो दिन बिदाइ गर्न सक्षम हुनको लागि सबैभन्दा विशेष कुनामा रहेको अर्कोबाट उम्कन सकेन। स्थापित भएको जादू कथन गर्न थोरै छ र रमाइलो पनि छ।
हामी फेरि पार्कको बारेमा कुरा गर्दैछौं, तर यो सहि हो कि संयोजनको बीचमा दलदल साथसाथै यस्तो ठाउँमा पाइने पशुहरू, यसले तपाईंलाई आराम र अद्वितीय क्षणको आनन्द लिनको लागि निम्तो दिन्छ। यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि यो त्यस्तो समय हो जब धेरै व्यक्तिहरू नजिक आउँछन्।
यो भेद्रे हो
यो एक छ टापु Ibiza धेरै नजिक र अर्को कुनाहरू जुन हामी भुल्न सक्दैनौं। तपाई यसलाई बिभिन्न बिन्दुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, आईलेटमा पुग्नको लागि, तपाईं यसलाई समुद्रीमार्फत मात्र पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो भनिनु पर्दछ कि यसको सुन्दरता यस्तो छ कि कुनै पनि नजिकको कुनामा तपाईंले हामीले उल्लेख गरेको त्यो उत्तम पलको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। स्पेनमा सूर्यास्तको आनन्द लिन थुप्रै ठाउँहरू छन्, तपाईको के हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » सूर्यास्त
मायाको चलन कसरी थियो